Ogaden News Agency (ONA) – Warsaxaafadeed Kasoo Baxay Xafiiska M/weynaha Dalka Eritrea oo Beeniyay in Dayaarada Weerareen
Warsaxaafadeed Kasoo Baxay Xafiiska M/weynaha Dalka Eritrea oo Beeniyay in Dayaarada Weerareen
War Saxafadeed kasoo baxay Xafiiska Madaxwenaha Dalka Eretria mudane Asayas Afoorqe ayaa ku tilmaamay been aan jirin wararka la’isla dhex maray ee sheegayay in dayaaradaha dagaalka Itobiya ay duqeeyeen meesha macdanta laga qodo ee Bisha.
Afhayeenka M/weynaha oo arintaa ka hadlay ayaa sheegay inay ahayd waxaan jirin oo la alifay. Wuxuu afhayeenka sheegay inuu rumaysan kari waayay warkan lagu qoray MineWeb markuu akhrinayay. Goobta Bisha ee macdanta laga qodo ayuu sheegay in aan la duqaynin, wuxuuna intaa idiin raaciyay afhayeenka M/weynaha Eretria in aanay Itobiya awoodin hadda inay duqayso Bisha.
Wuxuu kaloo sheegay afhayeenka in ciidanka cirka ee Itobiya la fadhiisay ka dib markii 12kii bilood ee ugu dambeysay ay 30 ka mid ah ciidanka cirka iyo dayaarado qaali ah oo malaayiin jooga iyo kuwa qumaatiga u kaca (helicopters) ay dalka Eritrea iska dhiibeen. Wuxuu sheegay afhayeenka in goobta macdanta ee Bisha dayactir lagu hayay todobaadkanna dib looga shaqaysiin doono.
Wuxuu ku tilmaamay afjayeenka wax lala yaabo in meel yaroo macdanta laga qodo la yidhaahdo waxaa weeraray dayaarado halkaana aanay ka dhicin dhimasho iyo dhaawac. Waxay ahayd buu yidhi in caqliga lala kaashado marka waxaasoo kale la sheegayo. Wararka noocaa ah waxaad ka maqlaysaan oo kali Itobiya ayuu yidhi afhayeenka, ma jirto cid kaloo hadal haysa oon ahayn Itobiyaanka hadaanan aniga soo hadal qaadin, waxaanan idinka codsan ayuu yidhi afhayeenka inaad iska ilowdaan wararka noocan ah oo ujeedada Itobiya ay ka leedahay uu yahay inay dhaqaalaha dalkanaga ku dhaawacdo.
Miyaanay ahayn buu yidhi waxaad la yaabtaan sababta aanay uga hadlin weerarkan aan jirin shabakadaha wararka sida Reuters, AP, BBC, AlJazeera iyo kuwa kale ee la rumaysan karo aanay arintaasi usoo hadal qaadin? Sababtoo ah waxay ogyihiin inuu ahaa waxaan jirin oo la sameeyay.